iPhone/Android ဖုန်းတွေမှာ Google Maps ကို ဘယ်လို လမ်းပြခိုင်းမလဲ...? ~ IT Guide Myanmar
9:09 AM Google Maps No comments
Posted by MgHla Mandalay at 4:49 pm
ကျတော်တို့ကိုင်နေတဲ့ iPhone/Android handset တွေမှာ Google Maps App ထည့်ထားတယ်၊ အင်တာနက်လည်း ရတယ်၊ GPS လုပ်ဆောင်ချက်လည်း လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျတော်တို့ သွားချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို Google Maps ကို လမ်းညွှန်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်... Google Maps မှ မဟုတ်ပါဘူး... Google Maps နဲ့ အလားတူတဲ့ GPS navigation app တွေမှာ လုပ်လို့ရပါတယ်... မြန်မာပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး ကျတော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ Google Maps ပါ... ကျတော်တို့ မရောက်ဖူးတဲ့မြို့ရောက်နေတယ် သွားချင်တဲ့နေရာကို Google Maps က လမ်းညွှန်ပေးမှာပါ... လက်ထဲမှာ iPhone ပဲ အဆင်သင့်ရှိနေလို့ သုံးနည်းကို iPhone က Google Maps App နဲ့ပဲ လမ်းညွှန်ပါရစေ... မသုံးဖူးတဲ့သူတွေ အတွက်ရည်ရွယ်ကြောင်း ကြိုတင် မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ...
၁. လုပ်ရမယ့် အဆင့်ကတော့ GPS ဖွင့်ပါ... (iPhone မှာ Google Maps ကိုလည်း GPS အသုံးပြုခွင့်ပေးပါတယ်ဆိုတာ on ထားရပါမယ်...
၂. အင်တာနက်ဖွင့်ပါ... အင်တာနက်မရရင် လမ်းညွှန်ခိုင်းလို့ မရသေးပါ... E/3G/WiFi ကြိုက်တာ ဖြစ်လို့ရပါတယ်...
၃. Google Maps app ကို ဖွင့်ပါ... ကြိုတင် install လုပ်ထားရန် လိုပါတယ်....
၄. Search box ထဲမှာ ကျတော်တို့ သွားလိုတဲ့ နေရာကို ထည့်ပါ... ပြည်တွင်းမှာတော့ နေရာ အကုန်မရှိနိုင်ပါ... မတွေ့ရင် နာမည်ပြောင်းရှာကြည့်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ...
၅. ကျတော်ရှိနေတဲ့ နေရာကနေ ဝီဇိတာရုံ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားမှာမို့ Wizidaryon လို့ရိုက်ပြီးရှာပါတယ်... အောက်ကပ်ရပ်မှာ WiZiDarYone Monaster လို့ပေါ်လာပါတယ်... ကျတော် သွားမယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်လို့ ရွေးလိုက်ပါတယ်...
စိတ်ပါရင်တော့ Google Maps မှာ နေရာတွေ ဘယ်လို မှတ်လို့ရလဲ ထပ်ရေးပါ့မယ်...
၆. အနီရောက် အမှတ်အသားနဲ့ တည်နေရာကို ပြပေးပါတယ်... အခုရှိတဲ့နေရာနဲ့ ဝိဇိတာရုံဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဘယ်လမ်းက သွားလို့ရမလဲ လမ်းညွှန်ခိုင်းချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ဆုံး ညာဘက်ထောင့်က ကားပုံလေးပေါ်ကို နှိပ်ပါ..
၇. taxi/ကိုယ်ပိုင်ကား/သူငယ်ချင်းကား/ချစ်သူကား လိုမျိုးကားနဲ့သွားမှာဆို အိမ်စီးကားပုံလေးကို နှိပ်ပါ... ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားမှာဆိုလည်း အိမ်စီးကားပုံလေးကိုပဲ နှိပ်ပါ... အိမ်စီးကားပုံရဲ့ ညာဘက် တစ်ခုကျော်မှာရှိတဲ့ လမ်းလျှောက်သွားမှာဆိုရင်တော့ လူလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံကို နှိပ်ပါ... အလယ်က ကားကြီးပုံလိုလို/ရထားပုံလိုလိုက bus ကားလိုင်း၊ မီးရထားလိုင်းတွေကို ပြောတာပါ... ပြည်တွင်းမှာတော့ အလုပ်လုပ်မယ်လို့ မထင်ပါ...
ကျတော်က taxi ကားနဲ့ သွားမှာဖြစ်လို့ ကားပုံအသေးကို နှိပ်လိုက်တော့ Route options အောက်မှာ လမ်းကြောင်း ၃-ခု လာပြတယ်... Google Maps က ကျတော် အခုရှိတဲ့နေရာနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားလို့ရတဲ့ အဲဒီလမ်း ၃-ခုပဲ သိရှာတယ်...
၈. ကျတော် အပေါ်ဆုံးက6minutes ကြာမယ့် လမ်းကို နှိပ်လိုက်တော့ ဒီလိုလာပြတယ်... ကျတော်တို့ သွားရမယ့်လမ်းက အပြာရောင်နဲ့ပြထားတဲ့ လမ်းပေါ့... အင်တာနက်ကို ဒီအချိန်မှာ ပိတ်မယ်ဆို ပိတ်လို့ရပါပြီ... GPS တွေ့ ဆက်ဖွင့်ထားပါ...
လမ်းကြောင်းကို ကြည့်ရအောင်ပါ... ၈၂-လမ်းက နေ မြောက်ဘက်သွားတယ်... (အလိုလေး ဘုရားရေ... တစ်လမ်းမောင်းကို ပြောင်းပြန်ပြန်ထွက်တယ်...) ၂၇-လမ်းရောက်တော့ အရှေ့တက်(ညာချိုး)တယ်... လမ်း ၈၀ ရောက်တော့ မြောက်(ဘယ်)ကွေ့တယ်... ၂၆-လမ်းရောက်တော့ အရှေ့ (ညာ)ကွေ့တယ်... ၆၈-လမ်းရောက်တော့ တောင် (ညာ)ကွေ့တယ်.. ၃၁-လမ်းကျော်တော့ တွေ့ပါပြီ ဘုန်းကြီးကျောင်း...
ကျတော် မရွေးဖြစ်တဲ့ ကျန်တဲ့လမ်းကြောင်း ၂-ခုကိုလည်း ခဲရောင်နဲ့ပြထားပါတယ်...
Windows7 မှာ System Restore ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် နည်း...
သင့်ရဲ့ ဘဝကို ပြောင်းလဲချင်သလား?
android ဖုန်းတော်တော်များများကိုအလွယ် root နိုင်ပါ...
Windows 8 32-bit မှာ Ram ကိုပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်...
iPhone/Android ဖုန်းတွေမှာ Google Maps ကို ဘယ်လို ...
ဖုန်းထဲံက system app တွေကို ဖြုတ်ချင်သူတွေအတွက် sy...
ဓါတ်ပုံ ကို ကာတွန်းရုပ်တွေဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် ပရိုဂ...
ကြော်ငြာတွေ ဖန်တီးလို့ရမယ့် Aurora 3D Presentation...
FormatFactory 3.1.2 Final
Driver များကို Backup လုပ်ထားနိုင်ပြီး Driver မျာ...
ဝင်းဒိုး System ကို Auto Recover လုပ်ပေးမယ့် Deep ...
High-definition (HD) Full Video Converter 10.3.9
Internet Download Manager 6.17 Build6Final + Ret...
ဝင်းဒိုး 8 မှာ Start Menu ဖန်တီးပေးမယ့် 8StartBu...
Developer များအတွက် Code တွေကူရေးပေးမယ့် RJ TextEd...
ပုံတွေပြင်လို့ကောင်းတဲ့ SILKYPIX Developer Studio...
အရည်အသွေးမြင့် Blu-ray/DVD တြွောည့်လို့ရမည့် Powe...
ဓါတ်ပုံတွေကို ညက်ညှော အောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်မယ့် ရို...
HTC One အတွက် All In One Tool Kit (Root, Unlock Bo...
Samsung Android ဖုန်း အတု နဲ့ အစစ် ခွဲခြားနည်း ( R...
Samsung Galaxy S3 i9300 ကိုFRIMWARE ပြန်တင်ချင်တဲ့...
USB Multiboot For Computer Service
Zawgyi-One နှင့် Unicode နှစ်မျိုးလုံးသုံးချင်သူမျ...